Daawo muuqaalka: Culumaa’udiin Soomaaliyeed oo Bayaan ka Soo Saaray xaalaha uu maraayo dalka Soomaaliya |
Daawo muuqaalka: Culumaa’udiin Soomaaliyeed oo Bayaan ka Soo Saaray xaalaha uu maraayo dalka Soomaaliya
Shirweynihii 18aad ee jamaacada Al-ictisaam bilkitaab wasunnah oo socday muddo sedax maalin ah oo ay ka soo qeyb galeen mashaa’iq waaweyn oo ka kala yimid goballada dalka iyo caalamka ayaa lagusoo gabgabeeyay magaalada muqdisho.
Shirweynahan ayaa inta badan diiradda lagu saaray arrimo badan oo khuseeya dacwada islaamka iyo ayaaha ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ee ku nool dalka iyo dibadda.
Shirweynahan maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho oo ay soo qabanqaabisay Jamaacada Al-ictisaam bilkitaab wasunnah ayaa waxaa laga soo saaray bayaan ka kooban ilaa 17 qodob oo ku qotamaha arrimaha xaalada dalka hada uu maraayo,iyo waxyaabaha ka dhacaayo qaar ka mid ah wadamada islaamka.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ku hadlay Jamaacada Al-ictisaam bilkitaab wasunnah oo ugu horeyn madasha kulankasi hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay kulnkooda muhiimada uu lahaa looga hadlay arrimo quseeysa dalka soomaaliya.
Halkaan hoose ka daawo suda ay u dhacday munaasabadaani.